Erayga: MyBlogLog iyo BlogCatalog Widgets | Martech Zone
Dabka: MyBlogLog iyo BlogCatalog Widgets
Khamiis, Maarso 27, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Kuwa idinka ah ee muddo dheer wax akhriyayay, waxaad ogaan doontaan inaan ka saaray widget-yada MyBlogLog iyo BlogCatalog. Waxaan ku dhibtooday inaan ka saaro iyaga in muddo ah. Waan ku riyaaqay inaan arko wejiyada dadka waawayn ee booqda bartayaga badanaa - waxay ka dhigtay akhristayaasha inay umuuqdaan dad dhab ah halkii ay ka noqon lahaayeen tirooyin Google Analytics.
Waxaan ku sameeyay falanqeyn buuxda ilaha kasta iyo sida ay ugu kaxeeyaan taraafikada goobtayda iyo sidoo kale sida booqdayaashaydu ay ula falgaleen goobta. Waxaa laga yaabaa in waxa aan ugu necebahay labada widget ay ahayd:
MyBlogLog sawirro madhan. Hadaad daabacayso a Widget taas oo muujinaysa sawirro, markaa oo keliya tus sawiro.
BlogCatalog sawirro runtii ah xayeysiis loogu talagalay goobaha dadka. Kani waa xayeysiin bilaash ah mana ahan wixii aan ku saxiixay.
Afar bilood ka hor, waxaan soo maray nadiifinta dhinac dhinac ah - ka takhalusid boggeyga Technorati, FuelMyBlog, Iyo BlogRush. Technorati waxay umuuqataa inay runti si adag ushaqeyneyso si ay dareenkooda dib ugu soo celiso baloogyada - Waxaan rajeynayaa inay dib usoo laaban doonaan. BlogRush runti waxba kama qabanin waa la buunbuuniyey.
FuelMyBlog iyo BlogCatalog wali waa qalab wanaagsan oo macquul ah oo cusub bloggers si loo helo akhristayaal cusub. MyBlogLog ayaa u leexday daruuraha Yahoo! waxayna umuuqataa mid aan khusayn.
Iyadoo dhawr kun oo akhristayaal ah maalintii (websaydhka iyo RSS), MyBlogLog ayaa kaliya u keentay 16 booqdayaal balooggeyga:
Buugga Bloglog; si kastaba ha noqotee, waxay ii keeneen 58 booqasho isla waqtigaas.
Qaarkood, taasi waxay umuuqataa natiijooyin wanaagsan. Dhibaatadu waxay tahay in tani ay tahay hanti maguurto ah oo ku taal boggeyga. Dhinac midig waa meesha qaar badan oo ka mid ah akhristayaasheyda joogtada ahi ay la falgalaan faallooyinka, qaybaha, fiidiyowyada, iwm. bogga… Maahan 1.
Haddaba su’aalaha aan u baahnaa inaan ka jawaabo waxay ahaayeen:
Faa'iido intee le'eg ayay booqdayaashaydu ka heleen aaladaha loo adeegsaday? Ma hubo inay jirto wax faa'iido ah maadaama qofna uusan la macaamilin iyaga.
Faa'iido intee le'eg ayaan ka helayay aaladda widget-ka? Oo miyey faa'iidooyinkaasi ka miisaan badnaayeen faa'iidooyinka ay akhristayaashaydu lahaan lahaayeen iyaga oo u adeegsanaya booskaas xiriirinno ay iyagu leeyihiin sameeyey la falgalaan?
Gunaanadkeygu wuxuu ahaa in faa iidada aan helayay aysan kufilanayn inaan ku tuuro qayb weyn oo ka mid ah dhismooyinka ma guurtada ah. Runtii waxaan aaminsanahay in dhamaan adeegyadan ay wax badan ka faa'iidayaan taraafikadaada inta aanad waligood ka faa iidaysan doonin.
Sidaas darteed… waa la ceyriyey!
Akhriskeyga Xiga: Suuqgeynta Culeyska
Raadinta Visio… aka… Dadku Waxay La Yaaban Yihiin Sababta Aan Mac ugu Jiro
Mar 27, 2008 at 7: 39 PM
Weli miyaad raadineysaa booqashooyinka boggaaga midkood BlogCatalog ama MyBlogLog? Waan jeclahay MyBlogLog waayo waa tirooyin iyo sidoo kale inaan arko dadka booqanaya, in kasta oo aan arko waxaad uga jeeddo qaadashada dhismaha mareegta. Waxaan u maleynayaa inaan u dhaqaaqi doono MyBlogLog dhanka hoose ee dib u naqshadaynta soo socota, laakiin waan iska ilaalin doonaa.
Sidoo kale, haddii labadaas shaqadooda aysan qabanayn keenista dadka isticmaala, waa maxay? Sida iska cad waxaad sifiican usameyneysaa, Doug, ma dhamaan rukhsadaha iyo taraafikada raadinta ayaa kuu keenaya hits mise wax kale ayaa adiga sidoo kale kuu shaqeynaya?
Mar 27, 2008 at 7: 47 PM
Waxaan aaminsanahay inaan kasbado qof kasta oo soo booqda boggeyga. Waxaan raadiyaa baloogyo cusub marwalba, waxaan faallo ka bixiyaa baloogyadooda, oo waxaan ugu jawaabaa (:)) dadka keli ahaanta. Waxaan sidoo kale ka jawaabayaa emayllo badan intii aan kari karo markii lala xiriiro.
Intaa waxaa dheer, waxaan u maleynayaa in fasalada maxaliga ah ee aan ku sameeyo blogga iyo dhacdooyinka aan ku hadlo si weyn u caawiyaan. Waxaan hayaa shabakad badan oo asxaab iyo asxaab ah!
Waxaan sidoo kale jeclahay inaan dhiirrigeliyo ganacsiyada iyo adeegyada laga yaabo inaysan 'ahayn kuwa guud' oo aan helo fiiro badan. Waxaan si gaar ah u sameeyaa markay yihiin shirkado goboleed. Waxaan jecelahay inaan ku caawiyo dadyowga ku jira daaraddayda guriga!
PS: Haysashada baloogyada la hagaajiyay sidoo kale waa rooga cas ee loogu talagalay taraafikada mashiinka raadinta… laakiin waxyaabaha wanaagsan iyo taabashada shaqsiyeed waxay haysaa akhristayaasha cusub.
Mar 28, 2008 at 9: 50 AM
Waxaan xardhay boodhadhka yar ee dhinaca hoose ee dhinaca Clark's Picks ee baraha bulshada ee tirada badan ee aan ku soo biiray. Saadaalin ahaan, waxaan kahelaa taraafikada midka aan runti soo noqnoqdo, inta badan Fuelmyblog.
Hadda waxaan tijaabinayaa Entrecard iyo Spott taraafikada. Ma haysaa wax fikir ah oo ku saabsan barahaas?
Mar 28, 2008 at 9: 01 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagidaada falanqaynta tirakoobkaaga inteena kale. Xagee ka heshaa waqtiga?!
Sida adeegga suuqgeynta bulshada, Waxaan had iyo jeer ka doodaynaa wixii widget-yada ah ee loo adeegsan karo macmiil walba waligeyna ma garanayo waxa la soo jeedinayo.
Shakigeyga dhuumaaleysiga ah wuxuu ahaa inay dhammaantood ahaayeen "bling" oo aan wadin taraafikada dhabta ah. Marwalba waxaan ula jeeday inaan weydiiyo falanqeeyayaasha inay hubiyaan…
Hada waan ogahay…
Sii wad dhajinta, waan sii wadi doonaa akhriska !!
Mar 28, 2008 at 12: 21 PM
Way fiicantahay inaad shaqeysay si aad u aragto waxa ku kicinaya taraafikada bartaada iyo waxa aan ahayn.
Waa inaan sidaas oo kale ku sameeyaa websaydhadayda !!!
Mar 31, 2008 at 9: 22 AM
Waan ku faraxsanahay inaan arko BlogCatalog wuxuu kuu keenayaa xoogaa taraafiko qiimo leh. Ma noqon karto lambarada lagu turunturoodo ama Digg laakiin waxaad ogaan doontaa in xubnaheenna ay aad uga 'dheg dheg' badan yihiin shabakadaha kale.
Waan ka xumahay markaan arko inaad iska saartay wijidka BlogCatalog, laakiin waxay umuuqataa inaad hayso sababo wanaagsan oo sidaas lagu sameeyo. Miyaad fiirisay mid ka mid ah wijetiyadayada kale baryahan? waxaan haynaa wax yar oo soo bandhigaya dhinacyo kala duwan oo ka mid ah boggaaga iyo / ama waxqabadka shabakada bulshada. Tani way ka sii xiiso badan kartaa akhristayaashaada marka loo eego kaliya wejiyada aan kala sooca lahayn maaddaama ay tahay waxyaabo badan oo bartilmaameed ah. Qaado tusaale ahaan widget Feed-keena News, kaas oo sii xumeynaya waxqabadkaaga bulshada: http://www.blogcatalog.com/account.widget.php?type=feed
Dhamaan widget-yadayada sidoo kale waxay raadraacaan waxa xubnaha BC ay aqrinayaan baloogaga iyagoon u baahnayn inay soo bandhigaan sawirada / xayeysiiska widget-ka.
Sii wad shaqada weyn,
May 30, 2008 at 1: 01 PM
Si xun BlogCatalog ma dhaafo wax PR ah tan iyo markii ay isticmaalaan nofollow.
Mar 13, 2009 at 3: 05 AM
Nabade Douglas, way fiicneyd inaan kugu arko Twitter, waa sidaan halkan ku imid. U xiisee inaad ogaato sida ay Twitter kuugu shaqeyso. Waan ku raacsanahay inuu buufiyo baararkaas marba marka ka dambeysa! U xiisee inaad waxbadan ka maqasho Technorati. Waxaan arkaa dad badan oo ka tagaya mareegaha internetka iyagoo adeegsanaya Technorati, laakiin in aad u yar ayaa sidaas ku timaadda goobaheyga…
Apr 6, 2009 at 6: 37 AM
Sababta kaliya ee aan u haysto Mybloglog, blogcatalog, myblog shidaal waa sababta oo ah waxaan doonayaa inaan arko cidda booqata. habkaas ayaan sidoo kale ku hubin karaa boggaggooda. waxaa laga yaabaa inay calaamad u tahay dib u soo celinta iyo aniga sidoo kale inaan ogaado waxa suuragalka ah ee ay ugu direen boggeyga.